Haweeneey Laga Duubay Muuqal Galmo Ah Oo Ansha Daro Ah Kadibna Is Dishay | Raadgoob
Haweeneey Laga Duubay Muuqal Galmo Ah Oo Ansha Daro Ah Kadibna Is Dishay
Bishii April ee sannadkii, 2015-kii haweeneeydan 31 jir ahayd oo ka soo jeedda Mugnano oo ku taalla banaanka Naples, ayaa waxa ay muuqaallo galmo ah WhatsApp ugu dirtay shan qof, waxaana ka mid ahaa saaxibkeed Sergio Di Palo oo uu markaasi ka dhexeeyay xiriir aan wanaagsanayn.
Muuqaalada ayaa waxa ay muujinayeen iyadoo ficillo galmo ah la sameeneeyso rag aan heebtooda la garanaynin.
“Aad ayay u quruxbadnayd balse qof nugul ayay ahayd ,” ayay tiri Teresa Petrosino, oo ay 15 sanadood saaxiibo ahaayeen. ” Waxaa u kulmay dad xun iyo xilli xun.” ayay intaa ku dartay.
Muuqaalada ayaa durbadiiba lagu baahiyay baraha bulshada. Waxaana cajaladaha laga duubay ku jiray iyadoo ninka kaamirada ka duubayay la hadlayso iyadoo leh shaqa wanaagsan ayaad haysaa, taasi oo muujinaysa in ay raali ka aahyd in laga duubo muuqaalka.
Waxa uuna hadalkeedaas dadkii daawanayey u fududeeyay in si cabsi la’aan ah u daawadaan muuqaalkeeda galmada ah sababtoo ah waa ay ku farax sanayd in laga duubo cajalka.
Balse dadka reer Talyaani, daawasho uun kumay ekaanine, sawiradeeda iyo hadal haynteeda ayaa meelkasta ku baahay oo xitaa fanaanado ayaa sawiradeeda lagu xardhay.
Ma jirin cid ka wal-waleeysay muuqaalka sabatoo iyada ayaaba ku farxsanayd, balse dadku waa ay ku jah-wareereen arrintan.
“Tiziana Cantone, iyo aniguba si caadi ugama aan wada hadal faah-faahinta muuqaalka,”ayay tiri saaxibteed Teresa. “Weligeey ma daawan, mana doonayo in aan daawado. Waad qiyaasi kartay in ay dhibanatahay. Balse waxa ay u muuqatay qof adag.”
Ms Cantone waxa ay markii dambe dagaal u gashay in muuqaalada laga saaro website-yada balse si dhaqsiya waa ay ugu suura-gali weeysay.
Maxkamadda ayay kiiskeeda geeysay, iyadoo ku doodeeysay in muuqaalada la galiyay website-yada iyadoon ogolaansho la weeydiisan.
“Nolosha ayay ciriiri ku gashay oo xitaa banaaka waa ay u soo bixi weysay sababtoo ah marka ay dibedda u baxdo dadku ayaa aqoonsanayaan. Waxa ay xaqiisatay in nolosha adduunka iyo tan aakhiraba ay isku midyihiin,sida ay aaminsaneed ” ayay tiri Teresa.
Waxa ayna garwaaqsatay in xaaladda aan la xallin karin ayna suuragal tahay in mustaqbalka ay ninkeeda iyo caruurteeda muuqaallada heli karaan oo ay daawan karaan.
Image captionMaria Teresa oo ah hooyada dhashay Tiziana ayaa haatan isku shuqleeysa sidii ay ku difaaci lahayd magaca gabadheeda
“Gabadheeydu waa ay wanaagsanayd balse khatarta ayay u nuglayd sabatoo ah waxa ka maqnaa kaalintii aabaha oo weligeed ma aysan arag, marka taasi ayaa nolosheeda saameyn ku yeelatay,” sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Maria Teresa oo ah hooyadda dhashay gabadha.
13 September 2016-kii Maria Teresa Giglio shaqada ayay aaday gabadheedana guriga ayay kaga tagtay, balse iyadoo shaqada ku sugan ayaa telefoonka laga soo wacay.
“Dumaashideey ayaa isoo wacday, si deggen ayayna ila hadashay waxa ay igu tiri imoow guriga; markii aan gaaray guriga ayaa waxaan arkay boolis iyo ambulance, marka durbadiiba waan fahmay in ay gabdheeyda is dishay,” ayay tiri Maria Teresa.
“Maalintii ay geeriyootay, ayay noloshaydana u dhamaatay.”